Maxay kawada hadleen taliyaha booliska Somaliya iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Qaranka? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxay kawada hadleen taliyaha booliska Somaliya iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Qaranka?
Maxay kawada hadleen taliyaha booliska Somaliya iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Qaranka?
Muqdisho (Halqaran.com) – Taliyaha Booliska Soomaaliya iyo Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka, ayaa ka wada hadlay arrimaha ku saabsan ammaanka doorashada la filaayo inay ka dhacdo Soomaaliya.
Guddoomiyaha Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka, Xaliimo Ismaaciil Ibraahim iyo Taliyaha Ciidanka Booliska, General Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar) ayaa maanta kulan ka yeeshay arrimaha doorashada dalka ee soo socota iyo doorka ay ka qaadan karaan ciidaamada ammaanka gaar ahaan, kuwa Booliska.
Labada dhinac ayaa isla gartay muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo doorasho ku dhacdo xaalad nabadgelyo leh.
Taliyaha Booliska ayaa sheegay inay ciidamada xilli waliba u diyaarsan yihiin suggida ammaanka dalka.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka, Xaliimo Yarey ayaa ka mahadcelisay sida wanaagsan ee Ciidamada Booliska uga shaqeeyan suggidda ammaanka dalka.
Ugu dambeyn, waxaa socda qorshaha loogu diyaargaroobayo in dalka ay ka dhacdo doorasho, inkastoo aanan la ogayn nooca doorasho ee dalka ka dhaceysa 2020/2021.
guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Qaranka
Kulanka taliyaha booliska Somaliya iyo Xaliimo Yareey